अम्बा फलको खेती प्रविधि | Krishi Dabali
गृह कृषि प्रबिधी अम्बा फलको खेती प्रविधि
अम्बा कस्तो हावापानीमा हुने फलफूल बाली हो ? अम्बाले उपोष्ण प्रदेशीय हावापानी रुचाएता पनि हिउदमा ठण्डा हुने उष्ण प्रदेशीय ठाउँहरुमा पनि यसको खेती सफलताकासाथ भई रहेको छ । यसले लामो समयसम्म तुसारो सहन सक्दैन तर राम्रोसंग फूल फुल्न र फल उत्पादन हुन हिउँदमा चिसो तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ ।
अम्बा खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ? अम्बा खेती बलौटे, दोमट, चिम्टाईलो, रातो कालो सबै किसिमको माटोमा गनै सकिन्छ तर जमीनमा पानी जम्ने अवस्था भने सृजना हुनु हुदैन । समथतर जमीनमा पानीको निकासको ब्यवस्था राम्ररी मिलाउनु पर्दछ ।
अम्बाका बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ? बिरुवाको दुरी कति कायम गर्ने भन्ने कुरामा बिरुवा प्रजनन् गरिएको तरीका, जात, माटोको उर्वरा शक्तिमा भरपर्दछ । साधारणतया ३ देखि ८ मिटरको दुरी भित्र बिरुवा लगाउनु पर्दछ ।
अम्बाको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाडल खन्नु पर्दछ ? रेखाङ्कन गरी बिरुवा रोप्ने ठाउँ निश्चित गरिएको ठाउँमा १ घन मिटरको खाडल खनी १५–२० दिन खाडललाई सुक्न दिई त्यसपछि २०–२५ के.जी. कम्पोष्ट-गोबर मल मिलाएर खाडल पुर्नु पर्दछ ।
नेपालमा अम्बाका प्रचलित जातहरु कुन कुन हुन् ? नेपालमा खेती भई रहेका प्रमुख जातहरुमा लखनऊ–४९, अलहावाद सफेद, वनारसी, चित्तिदार, केजी–१, रेड फ्लेस्ड, वेदना, स्थानीय आदि हुन ।
अम्बाको बिरुवा उत्पादन गर्न कुन–कुन विधि अपनाउ सकिन्छ ? यसका बिरुवा बीउबाट, गुटी बाँधेर, ग्राफ्टीङ्ग, वडिङ्ग, स्टुलिङ्ग, कटिङ्ग आदि सबै विधिबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ तर सफल विधिमा बीउबाट निकाल्ने र गुटी बाध्ने दुईवटा विधि हुन् । हाल नेपालमा गुटी बाँधेरनै बिरुवा उत्पादन गरिन्छ ।
अम्बाको बोटहरुमा कस्ता–कस्ता कीराहरुले सताउछन् ? यसमा फलको औंसा, मिलिवग, कत्ले, बोक्रा तथा पात खाने झुसिल कीरा आदिले नोक्सान गर्दछन्। यिनीहरु मध्ये फलमा लाग्ने औंसा सबैभन्दा हानीकारक हुन्छ।
अम्बालाई ‘खटिरे’ रोग लागे के गर्ने ? रोगले आक्रमण गरेका भागलाई हटाई जलाउनु र काटछाट गरेको ठाँउमा ‘वोर्डो पेष्ट’ बनाएर छर्कनु पर्दछ। जब माटोमा ‘क्याल्सियम’ र ‘बोरन’ को कमी हुन्छ तब यो रोग देखा पर्न सुरु गर्छ।
अघिल्लो लेखमागर्मीमा खान हुने तरकारीहरु अनि यसका फाईदा
अर्को लेखमागर्ने हैन त नौलो फल रामबुटानको खेती